Antenimieram-pirenena : Fitantanana manaraka ny fitsipika ara-bola
lundi, 16 novembre 2020 07:48
Izay maharitra vadin’andriana. Izay no mahalaza ny tranga misy eny amin’ny Antenimieram-pirenena. Fahagagana ho an’ny mpitantana ao anatiny ny mahita olona aty ivelan’ny Lapa milaza fa tsy mahaloa karama ity andrimpanjakana ity, mihoatra lavitra izany aza ny fanelezam-baovao hafa milaza, na tsy mamoaka porofo mazava aza, fa misy fanodinkodinam-bola ao.
Voafaritra mazava araka ny Lalampanorenana fa Andrim-panjakana ny Antenimieram-pirenena. Izay koa no mitarika fa tsy maintsy manaraka ny fitsipika ny fitantanam-bolam-panjakana ny fikirakirana vola, fa tsy misy vola mandehandeha na mivoaboaka ho azy.
Misy ny dingana samihafa arahina amin’ny fahazoam-bola, ary ialohavana fanamarinana ataon’ny fanjakana ihany koa vao misy fivoaham-bola. Mety handany fotoana izany. Ary misy ihany koa ny fanamarinana avy amin'ny mpitantam-bola hafa indray aorian'ny fandaniana, contrôle à priori ataon'ny contrôle financier alohan'ny fandaniana, ary contrôle posteriori ataon'ny Trésor rehefa handray vola.
Etsy andaniny dia ny lalàna mifehy ny fitantanam-bola no mamaritra ny vola iasana sy ihodinana ary andoavana karama sy tambinkarama samihafa, eny amin’ny Antenimieram-pirenena.
Ny 11 novambra teo izao dia nisy didim-panjakana noraisina nandritra ny filankevitry ny governemanta amin’ny hanomezana vola ny Antenimieram-pirenena, tafiditra amin’ny fanatanterahana ny tetibola 2020.
Mifanojo indrindra amin’ny fanazavana nentin’ny filohan’ny Antenimieram-pirenena, Razanamahasoa Christine, izay nilazany fa mila 7 miliara Ariary fanampiny ny ao Tsimbazaza hahafahana manao ireo fandaniana nateraky ny fisondrotan-karama 13%, sy ny fandoavana ireo tambinkarama samihafa voafaritry ny tetibola 2020, ny fahazoana io fanampim-bola tapaka nandritra ny filankevitry ny governamanta io.
Ny fahatongavan'io fanampim-bola io no ahafahana mandoa ny karaman'ny mpiasa rehetra eo anivoan'ity andrimpankana ity, rehefa vita ireo fanamarinana rehetra izay feran'ny lalàna.
Raha nisy ny fahatarana kely, noho io tsy fahampian'ny teti-bola teo aloha io, tamin'ny fandoavana ny karaman'ireo mpiara-miasa mpanampy ireo Solombavam-bahoaka, na ny assistant parlementaire, dia efa andalana izany fandraisana karama izany, izy ireo rahateo dia mandray mivantana izany karama izany any amin'ny Trésor, izay misoratra amin'ny anarany hitakiana karapanondro ny fandraisana izany.
Andrimpanjakana lehibe, izay ny antoko eo amin’ny fitondrana no manana ny maro an’isa ao, ary avy amin’ny antoko eo amin’ny fitondrana ihany koa ny filohany, ka tsy azo heverina ny hoe tsy hahaloa karaman'ny mpiasa ao aminy ity Antenimieram-pirenena ity.